Ukuvela kwiNkwenkwezi ukuya kwiiNtshontsho eziMhlophe: i-Saga yeS Star-like Star
Sayensi Iinkwenkwezi kunye namaPlanethi
Amancinci amhlophe afuna izinto ezinqwenelekayo ukuba iinkwenkwezi ezininzi zingena kuzo njengengxenye "yobudala." Uninzi lwaqala njengeenkwenkwezi ezifana neLanga lethu. Kubonakala kungenangqiqo ukuba ilanga lethu liza kuba ngenye indlela, libe yinkwenkwezi encinci, kodwa iya kubakho iibhiliyoni zeminyaka ukususela ngoku. Izazi zeenkwenkwezi ziye zazibona izinto ezincinci ezizungeze i-galaxy. Bayazi nokuba kuza kwenzeka ntoni kubo njengoko bepholile: baya kuba ngabafana abamnyama.
Ukuqonda abantombazana abamhlophe kunye nendlela abayifumene ngayo, kubalulekile ukwazi iinkqubo zeenkwenkwezi zobomi. Ibali eliqhelekileyo lilula kakhulu. Ezi iibhola eziqhekezayo ezinamafutha aphezulu zifake emafini wegesi kwaye zikhanyise ngamandla e-fusion enyukliya. Bashintsha ngexesha lokuphila kwabo, behamba ngeendlela ezahlukeneyo kunye nentshisekelo. Basebenzisa ininzi yobomi babo beguqula i-hydrogen kwi-helium kwaye bavelise ukushisa nokukhanya. Iingcali zeenkwenkwezi zitshatile ezi nkwenkwezi kwigrafu ebizwa ngokulandelelana okuphambili , okubonisa ukuba yintoni isigaba ekukholekeni kwabo.
Emva kokuba inkwenkwezi zibe neminyaka ethile, zitshintshela kwizigaba ezintsha zobomi. Ekugqibeleni, bafa ngendlela ethile kwaye bashiye izinto ezibangelisayo malunga nabo. Kukho izinto ezintle ngokwenene ezibonakalayo ezinkwenkwezi ezinkulu, ezifana nezimbobo ezimnyama kunye neenkwenkwezi ze-neutron . Abanye baphelela ubomi babo njengoluhlobo oluthile lwezinto ezibizwa ngokuba mhlophe.
Ukudala i-White Dwarf
Inkwenkwezi iba njani isilwanyana esimhlophe? Indlela yokuziphendukela kwemvelo ixhomekeke kubukhulu bayo. Inkwenkwezi ephezulu-enye kunye neyesibhozo okanye ngaphezulu ubukhulu beLanga ngethuba elikulandelelwano oluphambili-liya kuqhuma njenge- supernova kwaye yenze inkwenkwezi ye-neutron okanye umda omnyama. Ilanga lethu aliyona inkwenkwezi enkulu, ngoko ke, kunye neenkwenkwezi zifana naso, ziba zimhlophe ezimhlophe, kwaye ziquka i-Sun, iinkwenkwezi ezincinci ngaphezu kwelanga, kunye nezinye ezikuyo phakathi kobunzima beLanga kunye abaphezulu.
Iinkwenkwezi ezincinci (ezo malunga nesiqingatha sobunzima be-Sun) zilula kangangokuba ukushisa kwabo okusemgangathweni akuzange kushushu ngokwaneleyo ukuba kufakwe i-helium kwi-carbon kunye ne-oksijini (isinyathelo esilandelayo emva kwe-hydrogen fusion). Emva kokuba i-hydrogen ephezulu yenkwenkwezi ephantsi iphela, i-core yayo ayikwazi ukuxhathisa ubunzima beendlawu ngaphezu kwayo, kwaye yonke iyawa ngaphakathi. Okushiywe kwenkwenkwezi kuya ku-compress in a helium white clock-into eyenziwe ngokuyinhloko ye-helium-4 nuclei
Kuze kube naliphi na inkwenkwezi ephilayo ngokukhawuleza ngokulingana nobukhulu bayo. Ienkwenkwezi ezincinci eziza kuba yi-helium ezimhlophe zineenkwenkwezi ziza kuthatha ixesha elingaphezulu kwexesha lemvelo ukuba zifike kwindawo yazo yokugqibela. Zipholile kakhulu, ngokukhawuleza. Ngako oko akukho mntu ubonayo epholile ngokupheleleyo, kodwa kunye neenkwenkwezi ezingapheliyo zincinci. Oko akutsho ukuba abakho. Kukho abaviwa, kodwa bavela kwiinkqubo zobuncaka, babonisa ukuba uhlobo oluthile lolahleko lujongene nokudalwa kwabo, okanye ubuncinci ukukhawulezisa inkqubo.
Ilanga liya kuba ngumntu omhlophe
Siyabona amanye amaninzi amhlophe apha apho aqala ubomi bawo njengeenkwenkwezi ezifana neLanga. Le mibalala emhlophe, eyaziwayo njengabafana abancinciweyo, iinjongo zeenkwenkwezi ezineziganeko ezilandelelanayo eziphakathi kwe-0.5 ne-8.
NjengoLanga lethu, ezi nkwenkwezi zichitha ixesha elininzi lobomi bazo zifake i-hydrogen kwi-helium kwiimpawu zazo.
Emva kokuba baphumelele kwi-hydrogen yabo, ama-cores compress kunye neenkwenkwezi ziya kwanda ukuba zibe yi-giant red. Icosa i-core kuze kube yi-helium fuses ukwenza i-carbon. Xa i-helium iya kuphuma, i-carbon iqala ukuxhamla ukwenza izinto ezinzima. Ixesha lobugcisa kule nkqubo "yinkqubo ye-alpha": "i-helium nuclei fuse yokwenza i-beryllium, ilandelwe ukuhlanganiswa kwe-helium eyongezelelweyo eyenza i-carbon.)
Emva kokuba yonke i-helium engundoqo iqhutywe, ingundoqo iya kuphelisa. Nangona kunjalo, iqondo lokushisa eliphambili aliyi kushushu ngokukhawuleza ukuyifaka i-carbon okanye i-oxygen. Esikhundleni salokho, "iyanamathela", kwaye inkwenkwezi ingena kwisigaba sesibini esibomvu seqhosha . Ekugqibeleni, iingqamlezo zangaphandle zeenkwenkwezi zinyanzeliswa kwaye zenze i -nebula yeeplanethi .
Okushiywe ngasemva yintsika ye-carbon-oksijeni, intliziyo yombala omhlophe. Kunokwenzeka ukuba ilanga lethu liza kuqala le nkqubo kwiminyaka eyiebhiliyoni ezimbalwa.
Ukufa kwabaNtsundu abaMhlophe: Ukwenza abaNtsundu abaNtsundu
Xa umtshini omhlophe uyeka amandla okuvelisa nge-fusion yamandla enyukliya, ngokobuchwepheshe akusisona nkwenkwezi. Yintsalela ye-stellar. Kusatshisa, kodwa kungekhona kumsebenzi ongundoqo. Cinga ngamagqabini okugqibela ebomvu obomhlophe njengokuba kufana nokufa komlilo. Ngexesha elide liya kupholisa, kwaye ekugqibeleni liza kubanda kakhulu kwaye kuya kuba yinto ebandayo, ebhubhayo, into ebizwa ngokuba yi "black dwarf". Akukho mhlophe owaziwayo omhlophe oye wafika ngoku. Kungenxa yokuba kuthatha iibhiliyoni kunye neebhiliyoni zeminyaka ukwenzela ukuba inkqubo ivele. Ekubeni indalo iphela malunga neminyaka eyi-14 yezigidi zeminyaka ubudala, kwanokuba abantu bokuqala abamhlophe abazange babe nexesha elaneleyo lokupholisa ngokupheleleyo ukuba babe ngabantu abamnyama.
Iinqwenkwezi zafumana njani amagama azo?
Iintlobo zeenkwenkwezi: Ziziphi na?
I-Elliptical Galaxies: Amadolophu aseStellar
Ukujonga Iimpawu Zabahlali
Ukhangelelani i-Supernova kwiGalaxy ephakathi?
I-Space Oddities: I-Heartbeat Stars
Isingeniso kwiMigodi emnyama
Amakhanda aMnyama atshabalalisa ukuQongwa kweNkwenkwezi
Iingcali zenzululwazi Ziqwalasele iimvula ezinobunzima kwi-Space-Time
Ziyintoni eziNyulisiweyo kunye neeThathu eziThuthukileyo?
Abalandeli beSalsa abaSetyhini - Ngubani oya kuba nguKumkanikazi waseSalsa olandelayo?
Ezi Ziqulatho ZezoLuthando Ziyaziwayo Kakhulu Owake Wakuzwa
Ukukhuphula iCristal Crystals
Ngaphambi kokuba Uthenge i-Deck yamakhadi okudlala
Kuthetha ukuthini Ukuba ngumvangeli Wevangeli LobuKristu?
Lithetha ntoni igama lesiFrentshi elithi 'Coquin' ngesiNgesi?
Iimpawu zeMfihlakalo kunye neGrivity Hills
Indlela yokwenza i-DBNavigator
I-Glottal Stop (Phonetics)
I-Locker Organisation Iingcamango zokubuyela esikolweni
AmaSikh Baby Names ukusuka kwi-B
Iikhosi ze-Scuba Diving Courses Day
"Uyandithanda?" Wawabulala abo Aboyikayo
Kude kangakanani i-Paintball Gun Shoot?
Yintoni Eyona Nqabileyo Yomhlaba?
Umehluko phakathi kokufuduka kunye nokufuduka
Impumelelo YaseRussia / iSoviet Figure Skating Coaches
I-ALVAREZ Igama lomnqophiso kunye nomthombo
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseCedar Hill